Madaxda Puntland, K/Galbeed & Hirshabelle oo magalada Garoowe uga furmay shir Iskaashi cusub – Walaal24 Newss
Madaxda Puntland, K/Galbeed & Hirshabelle oo magalada Garoowe uga furmay shir Iskaashi cusub
May 12, 2019	Off	By walaal24
Shirkaan oo ka furmay Garoowe waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash, Madaxweynayaasha Maamulada Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen iyo Wasiirada sadexda garab ee shirku u furmay.
“Runtii waxaa sharaf wayn noo ah inaan halkaan ku qabsano shirkan sadex geesoodka ah oo runtii qayb ka ah geeddi socodka dib u dhiska Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya u noqon lahayd dowlad Federaal ah oo awood leh, waxaan ku faraxsanahay saaxiibaday Madaxweyne Cabdicasiis iyo Madaxweyne Waare oo runtii ka mid ahaa wafuuddii badnayd ee halkan kulahaa shirka wada-tashiga ah“. Ayuu yiri Madaxweynaha Dowaladda Puntland.
“Waxaa si gaar ah sharaf weyn noogu ah Puntland inay maanta labadan maamul ay wadayeeshaan iskaashi iyo xiriir, iyadoo hadda ka hor dowladdaha Galmudug iyo Jubbaland u dhexmareen heshiisyo iyo shirar noocaan oo kale ah oo ay iskaashi iyo wax wadaqabsi uga wada hadlayeen”. Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland
Ugu dambayn, Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in shirarka noocaan oo kale ah ay sii socon doonaan si ay qayb uga noqdaan horumarka dalka ee dhinacyada ganacsiga iyo wadashaqaynta dowladdaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka.
Maamul Goboleedyada oo ka horyimid xeerka Canshuuraha uu soo saaray Wasiirka Maaliyada
Ciidamada Sacuudiga oo dilay xubno looga shakiyay argagixisnimo gobolka dhaca Bariga dalkaasi ee Qatif
Dhageyso: Taliyaha Booliiska oo sheegay in shan Askari lagu helay magacyo kala duwan ay mushar ku qadanayeen
Dhageyso: Gudiga Aqalka Sare oo mudo u qabtay Madaxweynaha iyo Xukuumada in ay diyar u yihiin wada xaajoodka ay wadaan Golaha aqalka Sare.
Daawo: Wasiir Beyle oo ka hadlay Canshuurha Dekada laga qaado kana warbixiyey sida loo canshuuro